Fanoherana… famorehana - ewa.mg
News - Fanoherana… famorehana
Mby aiza ny fiovana sy fanovana ny
fomba fanaovana politika? Saika ny afitsoky ny hoe mpanohitra
manoloana ny ataon’ny mpitondra hatrany no anombanana sy
hitsaran’ny maro izany. Raha ny mpitondra, manana sy mampiasa ny
fahefam-panjakana amin’ny fanatanterahana izay nampanantenainy
tamin’ny fampielezan-kevitra nifidianan’ny vahoaka azy…
Takina aminy ny
tamberin’andraikitra amin’ny hoe fitondrana tsara tantana, tany
tan-dalàna, mangarahara, ahazoana maneho hevitra… Mby aiza? Mitsara
ny vahoaka raha misitraka fampandrosoana amin’ny fiainany
andavanandro: ny fandriampahalemana, ohatra, ny fitsaboana, ny
fampianarana, ny famoronana asa… Efa misy fiovana sy fanovana ho
amin’ny tsaratsara kokoa no ho ny teo aloha?
Raha misy tsy fahavitana sy tsy
fahombiazana, eo no ilana ny mpanohitra hatrany ifotony: hanaitra,
hanitsy, hanoro hevitra; hanao fanamby fa mahavita tsara sy be
lavitra raha mahazo fitondrana ka tsara fidina amin’ny manaraka.
Saingy tonga hatrany ifotony ho amin’ny tena fitsinjovana ny
fiainam-bahoaka amin’ny fanaraha-maso ny fanatanterahana mpitondra,
izay nampanantenainy ve ny mpanohitra?
Izay no anisan’ny mahatonga ny
vahoaka ifotony leo na tsy matoky mpanao politika, indrindra ny hoe
mpanohitra: tsy mahalala afa-tsy fahefam-panjakana? Nefa mila
manana foto-kevitra sy fandaharanasa ary paikady ho amin’izany
hisian’ny fampandrosoana amin’ny fanoherana miainga any ifotony.
Sarotra izany? Tsy hisy hanao… Tsy sahy mijoro sy tsy miatrika
fifidianana any ifotony?
Any amin’ny firenen-dehibe, isaky
ny kaominina na minisitera, ohatra, ny fanoherana amin’ny
fanaraha-maso sy tolo-kevitra raha ilaina: mitohy ho azy ny
raharaha rehefa mahazo fitondrana. Hafa be amin’ny ny hoe fitakiana
fiaraha-mitantana, fametraham-pialana, fanakorontanana… Mitondra
inona eo amin’ny fiainam-bahoaka any ifotony? Na karazana fitaka sy
famorehana ny fanoherana…
L’article Fanoherana… famorehana a été récupéré chez Newsmada.
Loza mihatra amin’i Madagasikara ny faharinganan’ny karazana varika, izay tsy misy afa-tsy eto amintsika. Ny olombelona ihany anefa ny fahavalo mandringana azy sy ny ala, toeram-ponenany.Tsy mitsaha-mitombo ! Namoaka ny lisitra mena 2020 mikasika ny biby sy ny zavamaniry tandindomin-doza maneran-tany ny Vondrona iraisam-pirenena miaro ny zavaboary (IUCN), ny 9 jolay teo.Miisa 32.441 ny karazana biby sy zavamaniry tandindomin-doza tamin’ireo 120.372 nohadihadina, manome ny 27%. Tafiditra ao anatin’izany ny varika eto Madagasikara, izay ahina ho ringana ny 103 amin’ireo karazany 107, voarain’ny IUCN lisitra. Marihina fa miisa 113 izao ny karazana varika fantatra eto Madagasikara, ka vao hitan’ny mpikaroka malagasy sy vahiny farany teo ny iray, ny microcebus jonahi, varika anisan’ny tena kely (26 sm ny halavany).Miisa 33 ireo karazany tena ahina ho lany tamingana, ho ringana tsy ho ela, toy ny varika menamaso, ny varika mainty sy ny sifaka ary ny varibolo, izay efa potika daholo ny 90%-n’ny toeram-ponenany nefa tena maro aty Madagasikara. Eo koa ny varika madinika indrindra eto amintsika sy maneran-tany (23 sm ny halavany),Tsidy bitika an’i Berthe (microcebus Berthea), varika mivoaka amin’ny alina.Sarotra ny hamerenana azyMazava ny fanairana ataon’ny IUCN. Fahavalo voalohany, tompon’andraikitra ny faharinganan’ny varika eto Madagasikara ny olombelona, ny fanaovana tavy, fandoroana sy fanapotehana ny ala, toeram-ponenan’ny biby. Eo koa ny fihazana sy ny fihinanana ny henan’ny varika.Araka ny tatitra navoakan’ny sampana Biological Conservation, ny taona 2018, potika ny 44%-n’ny ala voajanahary eto Madagasikara, nanomboka ny taona 1950. Nomarihin’ny IUCN fa ho sarotra sady tsy afaka hiverina amin’ny laoniny intsony anefa ny zavamaniry sy ny biby ao aminy, satria tsy misy afa-tsy eto amintsika ny ankamaroany, manodidina ny 70%. Tsy ampy, araka izany, ny fambolen-kazo mahazatra fotsiny fa ilaina koa ny fiarovana ny biby.Njaka AndriantefiarinesyL’article Manaitra ny IUCN: ahina ho lany tamingana ny varika miisa 103 amin’ny 107 a été récupéré chez Newsmada.
Toliara-Nipoaka ny kaonteran-jiro: nilefa nandositra avokoa ny mpifidy
Nipoaka ny kaonteran-jiro ao amin’ny lycée Laurent Botokeky, tokony ho tamin’ny 7 ora maraina, omaly. Samy tsy nanampo ny rehetra ka nanao tari-dositra rehefa nahaheno izany fipoahana izany. Noheverin’ny maro ho baomba nipoka. Vokany, niato adiny iray ny fifidianana. Niezaka ny rehetra nanatona namono ny afo sady nampandre ny Jirama sy ny mpamonjy voina rehefa nahalala fa kaontera ity nipoaka ity. Nanapaka ny jiro manontolo ny Jirama ary efa maty ny afo, raha vao tonga ny mpamonjy voina. Nanolo sy nanamboatra ny simba izy ireo hisian’jiro ao amin’ireo birao fandatsaham-bato folo ao amin’ny fokontany TSF-Sud, Ankatsakesy Tsimenatse II. Heverina fa tsy hisy fiantraikany amin’ny fifidianana izany na niteraka hatairana ihany aza ho an’ny mpifidy.Mifampitana ny IRD sy ny mahaleo tenaAnkoatra izany, nandray ny andraikiny ny fokonolona nandroaka ireo mpitondra babaj manerana ny birao fandatsaham-bato. Na izany aza, nizotra tam-pilaminana ny fifidianana na niseho aza ny fitarain’ny kandidà samihafa toy ny fisian’ny kara-pifidianana miisa 70 amin’ny anaran’ny fokotany tsy misy ao anatin’ny fari-pifidianan’ny Toliara I. Eo koa resaka miely fa misy ny fizarana vary ho an’ny olona avy nifidy. Manodidina ny 30% ny taham-pahavitrihan’ny mpifidy. Raha ny vokatra vonjimaika kosa, mifampitady ny kandidàn’ny IRD, Andrianasoloniaiko Siteny, sy ny avy amin’ny tsy miankina, i Behaja.CMSL’article Toliara-Nipoaka ny kaonteran-jiro: nilefa nandositra avokoa ny mpifidy a été récupéré chez Newsmada.
News - Santé - Sport - News Mada
Lomano-Covid-19: azo lazaina efa sitrana i Vola mivady
Na mbola tsy nahavita ny fanaraha-maso farany aza i Harivola Marie Sarah (ex DTN ny lomano) mivady, azo lazaina fa efa sitrana raha jerena ny fivoaran’ny fahasalamany, araka ny fanazavan’izy ireo. Raha tsiahivina, nanomboka ny faramparan’ny volana jona i Vola mivady ny nitondra ny tsimokaretina Coronavirus, izany hoe, efa tapitra ny 15 andro nanarahan’izy ireo ny fitsaboana, saingy mbola manohy ny fanaraha-maso hatrany anefa ny mpitsabo. Mbola misy ihany koa ny fanafody arahina ary tsy hadino ny evoka, indrindra ny vavaka andro aman’alina. Isan’ny nanampy be azy ihany koa ny fanaovana fanatanjahantena, nampitombo ny herin-tsainy. “Ohatra ny manao fifaninanana mihitsy ny niheverako ny tenako, misy mpanazatra isan-karazany, ny fanahy, nyvatana, ny saina. Ny mpanaraka ihany koa, mandrisika avokoa ka raikitra ny ady”, hoy ny fitantaran’i Vola ny niatrehan’ity tsimokaretina Coronavirus ity. Tsapany ho mivoatra tsara isan’andro ny fahasalamany ka ankehitriny, tena efa tsara izy mivady, tsy ahitana intsony ireo soratr’aretina ary efa matanjaka tsara. Mi.RazL’article Lomano-Covid-19: azo lazaina efa sitrana i Vola mivady a été récupéré chez Newsmada.
Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga : Nanafatra fitaovam-piadiana
Fampidirana basy sy fitaovam-piadiana ary fanamiana miaramila tsy fanta-piaviana. Ireo no heloka efa miandry sahady an’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga, ankoatra ny raharaha any Frantsa. Nanenjana manoloana ireny fitaovam-piadiana sy fanamiana miaramila tsy fanta-piaviana naderadera teny amin’ny CCI Ivato ireny, ny fitondrana nandritra ny filankevitry ny minisitra notarihin’ny filoha mpisolo toerana, Rivo Rakotovao. Misy lalàna mifehy tokoa mantsy ity resaka fitaovam-piadiana sy fanamiana miaramila ity, ka voatery nangata-panazavana momba izany ny fitondram-panjakana. Tsy nahafaly ireo minisitra MAPAR anefa izany fanarahan-dalàna mikasika ny fampidirana basy sy fitaovam-piadiana izany, ka dia nirintona nanakatom-baravarana nivoaka ny efitrano fivoriana i Pierre Houlder, minisitry ny Asam-panjakana. Izay mihitsy ilay antsoina hoe MAPAR sy TGV, olona mihevitra hitondra fanjakana ve dia handika tsotra izao ny lalàna velona eto amin’ny tany sy fanjakana! Inona izany izao no maha samihafa an’i Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga amin’ireo mafia mpanao trafika-na basy? Voaporofo izao fa tsy misy ilàna azy mihitsy ity praiminisitra Ntsay Christian ity. Efa hita izao fa loza mitatao ho an’ny firenena izany fanafarana fitaovam-piadiana tsy fanta-piaviana izany, miampy ny fahatrarana ireo mpanao kidnapping, izay tsy iza fa olon’ny MAPAR, kanefa dia tsy misy fandraisana andraikitra hatramin’ny androany. Mahazo manafatra izay fitaovam-piadiana mety aminy avokoa ve izany ny olon-drehetra? L’article Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga : Nanafatra fitaovam-piadiana est apparu en premier sur .L’article Andry Rajoelina sy Mamy Ravatomanga : Nanafatra fitaovam-piadiana a été récupéré chez Triatra.
Kitra atsy La Réunion: mikasa ny hifindra ao amin’ny JSSP i Sedera
Mihenjan-droa ny tady eo amin’ny ekipan’ny Excelsior sy ny JS St Pierroise La Réunion, noho ny fifindran-toeran’ilay mpilalao baolina kitra malagasy, Andriamparany Mathieu Sedera. Tsy mamotsotra azy mantsy ry zareo Excelsior.Mandalo fotoan-tsarotra, amin’izao fotoana izao, ny fiainan’i Sedera, ilay mpilalao baolina kitra malagasy mila ravinahitra atsy La Réunion. Mahatsiaro tena fa tsy milamina sy tsy mahita fahafinaretana ny tovolahy, ao amin’ny ekipan’ny Exelsior, ka mikasa ny hiverina hilalao indray ao amin’ny JS St Pierroise.Marihina fa noho ny ratra nahazo azy, tsy nandray anjara tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i La Réunion, nikatrohan’ny Excelsior sy ny SDFC, i Sedera, ny alahady lasa teo. «Efa nanambara ny fanapahan-kevitro tamin’ny mpitantana ny klioban’ny Excelsior aho ary miandry azy ireo hamela ahy handeha», hoy i Sedera.Na eo aza ny fikasan’ity mpilalao malagasy ity hifindra lasy any amin’ny JSSP, nazava ny tenin’i Jacky Amanville, filohan’ny Excelsior ,fa efa nisy fifanarahana federaly eo amin’i Sedera sy ny ekipan’ny Excelsior ka tsy misy antony tokony hialany. Nomarihin’ity mpitantana ny ekipan’ny Orange ity fa manaja ny lalàna izy ireo ary noho ny fizirizirian’ny JSSP haka an’i Sedera, handefa taratasy any amin’ny federasiona frantsay ry zareo, hampahafantatra ity olana ity.«Tsy izahay no te haka an’i Sedera fa izy tenany mihintsy ny manam-paniriana hiverina hilalao indray ato amin’ny klioban’ny JSSP», hoy i Luçay Arayapin, mpitantana ny ekipan’ny JSSP. Tsiahivina fa efa nisy olana toy izao nanjo an’i Sedera izao koa ilay Malagasy, i Fabrice. «Fantatro avokoa ny ankamaroan’ireo mpilalao ao amin’ny JSSP, ary niaina zavatra nahafinaritra aho, fony mbola tao, toy ny nahazoana ireo amboara marobe. Eny, na ho mafy amiko aza ny hiady toerana amin-dry Bapasy sy ry Thomas Souévamanien sy ry Dada ary ry Djamali Souéfou Ali», araka ny nambaran’i Sedera hatrany.Betsaka ny azo ambara, raha ny fanamarihan’i Sedera, fa miandry ny taratasy famelan’ny Excelsior azy sisa ny tenany. Tompondaka L’article Kitra atsy La Réunion: mikasa ny hifindra ao amin’ny JSSP i Sedera a été récupéré chez Newsmada.
Nitondra fanazavana momba ny fitantanana an’Antananarivo Renivohitra ny ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina, omaly. Noresahiny tamin’izany ny momba ny Fitsipi-pifehezana monisipaly momba ny fikoloana fahasalamana (CMH). Eo koa ny fitaterana sy ny tsena ary ireo fotodrafitrasa samihafa.« Tsy voasazy rehefa tsy diso… Raisina ny fepetra rehefa misy ny fanelingelenana ny fiarahamonina, indrindra raha miverimberina izany ary afaka mitaraina ireo iharan’izany », hoy izy namaly ireo resabe momba ny CMH. Na izany aza, nambarany fa tsy mbola hampiharina izany. Ialohavan’ny fanentanana sy ny fanabeazana sady mbola miandry ny fanorenana fotodrafitrasa izany, araka ny nambarany. « Diso ny filazana fa hakan’ny CUA vola ny CMH. Samy hafa ny lamandy sy ny hetra », hoy izy. Natsidiny sahady fa hisy WC miisa 50 haorina mialoha ny faran’ny taona. Efa misy ny vola 32 miliara Ar avy amin’ny mpiara-miombona antoka hahazoana dabam-pako miisa 5 000 eny anivon’ny fokontany, sarety 600 sy borety 1 000 ary kifafa 45 000. Hanamboatra CSB miisa efatra sy idivianana fanafody ny iray tapitrisa dolara.Hivoaka ny tolo-bidy fanorenana tsena etsy Anosy Ankoatra izany, nambarany efa hivoaka ny tolo-bidy ho amin’ny fanorenana tsena etsy Anosy sy ny Coum 67 ha ary koa ny fanarenana ny Zaimaika. Efa manomboka koa ny fanamboaran-dalana ary hivoaka amin’ny herinandro ny tolo-bidy ho amin’izany. « Hatsaraina ny fomba fiasa amin’ny herintaona fa hovitaina mialoha ny fahavaratra aloha ireo lalana ireo », hoy izy.Etsy andaniny, nohitsiny fa tsy maintsy hofoanana ny fifanarahana amin’ny Easy park noho ny fitongilanana nefa kosa handoavam-bola hatrany ny “parking”. Hatao amin’ny fomba hafa amin’ny alalan’ny fandoavam-bola amin’ny “borne” izany. Hiitatra amin’ny tsena izany fomba fakana vola izany rehefa voaisa ireo mpivarotra. Mialoha ny faran’ny taona, homena toerana ireo mpivarotra etsy Behoririka. Haverina amin’ny toerany kosa ireo mpivarotra ara-dalàna miisa 16 etsy amin’ny Esplanade. “Manahirana ny fanararaotana politika ataon’ny sasany sy ny famadihana izany ho amin’ny sain-dratsy”, hoy izy. Hanorina trano fonenan’ireo sahirana ny CUAAnkoatra izany, nampanantena ny ben’ny Tanàna fa hanamboarana trano fonenana ka ireo tena sahirana na ireo may trano. Tsy ho maimaimpoana anefa izany fa haverina tsikelikely amin’ny alalan’ny fanomezana asa azy ireo na ny Himo. “Tsy mijanona intsony isika rehefa manomboka ny asa”, hoy izy. Nanteriny indray koa fa hatsaraina sy ahitsy ny fomba fakana hetra amin’ny fanorenana trano ka anisan’ny hahazoana izany ireo fanorenana lehibe, toy ny an’ny orinasa na tranobe.Hatsaraina ny vola miditra amin’ny taxi-beNoresahina koa ny vahaolana amin’ny fitohananan’ny fifamoivoizana. Eo ny fanamboaran-dalana sy ny fanalana mpivarotra. Halamina koa ny zotra andehanan’ireo taxi-be. Ampidirina Cnaps ireo mpiasa ary hotadiavina ny fomba hampiakarana ny vola miditra amin’ireo mpitatitra. Ampiasaina ny “géolocalisation”, hanaraha-maso ireo fiara ary hampiana amin’ny fividianana fiara izy ireo hifampiraharaha amin’ny mpandraharaha momba izany. Hoferana koa ny fidiran’ireo taxi-be “suburbaine” eto fa natao ho an’ny “urbaine”. Maka sisiny ireo avy any ivelan’ny Renivohitra.Ampahany amin’ireo resaka nifanaovan’ny ben’ny Tanàna, tamin’ny mpanao gazety, momba ny fitantanana an’Antananarivo, ireo.Synèse R. L’article Ben’ny Tanàna, Andriantsitohaina Naina: « Ilana fitsipika ny fitantanana ny tanànantsika » a été récupéré chez Newsmada.
Antsahavaribe: jiolahy roa nahatrarana rongony 31 kg
Jiolahy roa mpanao trafikana zava-mahadomelina no tratran’ny zandary avy ao amin’ny tobim-paritry ny zandarimaria ao Ambodimanga Antsahavaribe Sambava, afakomaly. Rongony milanja 31 kg miaraka amin’ny tavoahangy iray natao ho fidorohana rongony no tratra tany amin’izy ireo nandritra ny fisavana nataon’ny zandary. Naiditra am-ponja avy hatrany ry zalahy taorian’ny famotorana nataon’ny zandary.Fa tratran’ny polisy miasa ao Belo sur Tsiribihina koa ny lehilahy roa mpifoka rongony tao ami’ny fokontany Beraketa, afakomaly ihany koa. Nentina nanaovana fanadihadiana avy hatrany izy roa lahy ary mbola nahitana fonosan-drongony izy ireo nandritra ny fisavana. Mitohy ny famotorana ataon’ny polisy.J.CL’article Antsahavaribe: jiolahy roa nahatrarana rongony 31 kg a été récupéré chez Newsmada.
ADY AMIN’NY COVID-19 : Maska 100.000 isa avy amin’ny masoivoho KOREANA Atsimo
Tsy manao ambanin-javatra ny ady amin’ny « Covid-19 », ny Fitondram-panjakana Malagasy sy ny Ministeran’ny Fahasalamamam-bahoaka ary ireo Mpiaramiombonantoka aminy. Porofon’izany, maska na arotava miisa 100.000 no natolotry ny Masoivoho Koreanina Tatsimo izay miasa sy monina eto amintsika ho an’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka omaly 22 Septambra 2020 teny amin’ny « CCO Ivato ». Fanampiana andiany faha efatra izy ity hatramin’izay niatombohan’ny ady amin’ny valanaretina coronavirus teto amintsika izay. Nambaran’ny Masoivoho koreana Tatsimo, SEM Lim Sang-Woo fa mitohy hatrany ny fiaraha-miasan’ny Firenena roa tonta ary tsy adinony ny niarahaba an’i Madagasikara izy nahatohitra ny valanaretina « covid-19 ». Nampanantena izy fa eo hatrany ny Firenena Koreana, ary vonona ifanohana sy ifanome tanana amin’ny Vahoaka Malagasy. Andriamatoa Ministry ny fahasalamam-bahoaka, Prof. RAKOTOVAO HANITRALA Jean Louis, sy andriamatoa Minisitry ny Raharaham-bahiny, Dr TEHINDRAZANARIVELO Djacoba, notronon’ andriamatoa Mpandrindra Nasiônalin’ny CCO, Jeneraly Elack ANDRIANKAJA no nisolotena ny Fitondram-panjakana malagasy no nandray tamin’ny fomba ôfisialy ireo fanomezana ireo. Nanambara andriamatoa Minisitry ny Fahasalamam-bahoaka tamin’ny lahateny izay nataony fa natao indrindra hanamafisana ny fiatrehana ny ady amin’ny « Covid-19 » ireo fanomezana ireo. Ho zaraina amin’ ireo Tobimpahasalamana fototra eto Madagasikara, indrindra any amin’ireo faritra lavi-dalana. Nomarihany ihany koa fa na dia efa mihena aza ny tahan’ny fihanaky ny valanaretina dia tsy maintsy tohizana sy hamafisina hatrany ny fiarovana sy fahamailona ara-pahasalamana manoloana izany. Nisaotra sy nankasitraka ny Firenena Koreana Tatsimo ny tenany ary nanamafy hatrany ny fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny Firenena roa tonta. Fanadihadiana: SCM/MSANP L’article ADY AMIN’NY COVID-19 : Maska 100.000 isa avy amin’ny masoivoho KOREANA Atsimo a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Voina tampoka :: Vehivavy nianjeran’ny andrin-jiro
Nindaosin’ny fahafatesana vokatry ny fianjeran’ny andrin-jiron’ ny Jirama taminy ny vehivavy iray, tany Morafeno-Antsiranana I, afak’omaly. Vaky mihitsy ny karandohan’ity niharan-doza. Mpivaromandeha no asan’io vehivavy, izay monina any Antanampitsasy ao Antsiranana io ihany. “Andrin-jiro efa lozotra no nianjera tampoka. Nandray an-tanana ny fiantohana ny lany rehetra tamin’ny fikarakarana ny razana ny orinasa Jirama taty an-toerana rehefa nahalala ny zava-nisy. Misy ny fifampiresahana teo amin’ireo fianakavian’ny niharam-boina sy ny orinasa Jirama”, hoy ny angom-baovao avy any amin’ny Polisimpirenena any Antsiranana, izay manao ny famotorana momba izao tranga namoizana ain’olona izao. L’article Voina tampoka :: Vehivavy nianjeran’ny andrin-jiro est apparu en premier sur AoRaha.
Toetry ny andro: hafana eto afovoan-tany
Hiakatra ny maripana eto afovoan-tany, indrindra ny eto Antananarivo, ho an’ny telo andro manaraka ary ho maina ihany koa ny andro, araka ny fanazavan’ny teknisianina mpamantatra ny toetry ny andro, eny Ampandrianomby, omaly. Amin’ny maha fotoana mampisara-taona azy, mifandimby ny vanim-potoana ririnina sy ny fahavaratra mandritra ny tontolo andro indraindray ka izay no mahatonga ny volon’andro fahavaratra somary mibahan-toerana fa tsy mahatonga orana aloha, hatreto, izany na miakatra aza ny maripana. Ny faritra Vakinankaratra no hahazo orana sy ny tapany atsimo noho ny fandalovan’ny rindrin-drahona ao atsimon’ny Nosy izay handrafitra ny mety ho toetry ny andro. Tsy mbola ahina ny fiforonana rivodoza ho an’ny telo andro manaraka. Ny volana novambra ny fanombohan’ny fisehoan’ny rivodoza amin’ny ankapobeny. Handrivotra ny tendrony avaratry ny Nosy, ary hisy fidinana misongadina manomboka rahampitso ny maripana ambony any Sava sy any Analanjirofo.Anio maraina, hanorana ny any Miandrivazo sy ny ilany andrefan’i Bongolava sy i Vakinankaratra. Hisy zavon-tany vao maraina any Vatovavy Fitovinany, any Atsimo Atsinanana ary ny ilany atsinanan’afovoan-tany. Ny tapany hariva, hanorana mety harahin-kotroka any Bongolava, sy i Miandrivazo ary ny atitany ny faritra Melaky sy any Ambanja, ny ilany atsinanan’Atsimo Andrefana, Anosy, ny tapany avaratr’Anosy. Ho an’ny maripana, eto Antananarivo 14° sy 27°C ny maripana raha 11° sy 27 °C ny any Antsirabe.Vonjy A.L’article Toetry ny andro: hafana eto afovoan-tany a été récupéré chez Newsmada.
Fisamborana jiolahy :: Lehilahy maty voatifitra sady nahitana basy mahery vaika
Sarona niaraka tamin’ny basy mahery vaika “MAS 36” iray misy bala telo ny lehilahy iray, omaly vao maraina, tany Ankazobe. Voatondro ho isan’ireo nanafika tao amin’ny tokantrano iray tany Antakavana, tamin’ny 17 septambra lasa teo, izy. Teny ampisamborana ny namany, izay notononiny, no nisy ny fifampitifirana tamin’ny andian-jiolahy hafa. Namoy ny ainy tamin’io itsy jiolahy voasambotra itsy. « Efa voasambotra tany Beandrarezina-Beronono aty Ankazobe ihany izy. Nitaridalana anay andeha hisambotra an’ireo namany izy no niseho izao fifandonana tampoka tamin’ny jiolahy hafa izao », hoy ny loharanombaovao avy amin’ny Zandarimaria any Ankazobe. Tsy vahiny amin’ireo mpitandro filaminana ity jiolahy maty voatifitra ity satria isan’ireo malaza sy efa fantatra anarana ary karohina tamin’ny fanafihana mitampiadiana maro tany Anjozorobe, Maevatanàna sy Ankazobe izy. L’article Fisamborana jiolahy :: Lehilahy maty voatifitra sady nahitana basy mahery vaika est apparu en premier sur AoRaha.
Starex iray nivadika tany an-tanimbary, olona roa maty
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahafatesana olona roa teny amin’ny Rocade Andohatapenaka, ny asabotsy teo tokony ho tamin’ny 8 ora sy 30 mn alina. Fiara marika Hyundai Starex iray saika hisongona taksiborosy marika Sprinter izay samy mitodi-doha mizotra ho an’ny amin’ny rond point Maki Andohatapenaka no nifatratra tany an-tanimbary. Araka ny fanazavan’ny polisy, saika hisongona ity taksiborosy ity ilay fiara Starex na nandona ny vodin’ilay Sprinter ankavia. Mafy ny fifandonana ka nifatratra avy hatrany tamina andrin-jiro eo amin’ny sisiny ankavanana ilay Starex vao nifatratra nilatsaka tany an-tanimbary. Olona enina ny tao anatin’ilay fiara izay samy naratra avokoa hatramin’ny mpamily. Nahitana fahapotehana ihany koa ilay fiara noho ny dona mafy nahazo azy. Noho ny ratra mafy nahazo ireo niharam-boina anefa, namoy ny ainy teny an-dalana hihazo ny hopitaly ny olona roa (vehivavy iray 30 taona sy lehilahy iray 31 taona). Efa nahazo ny fitsaboana sahaza azy kosa ny mpamily sy ny mpandeha telo. Tsy vao izao no nahitana trangana lozam-piarakodia namoizana ain’olona amin’iny lalana Rocade iny, toy ny eny Marais Masay ihany, indrindra rehefa faran’ny herinandro. Misy ireo mpamily sasany manampatra amin’ny fampiakarana ny hafainganam-pandeha satria matoky loatra ny tanjaky ny fiara sy ny lalana migodana. Ny patsa iray anefa, tsy omby vava ka loza toy izao ny ateraky ny tandrevaka.J.CL’article Starex iray nivadika tany an-tanimbary, olona roa maty a été récupéré chez Newsmada.